I-Apple Pay kunye neVisa bamangalelwe ngokwaphula amalungelo awodwa omenzi wechiza | Ndisuka mac
I-Apple Pay kunye neVisa bamangalelwe ngolwaphulo mthetho
Ukumangalelwa kwelungelo elilodwa lomenzi phakathi kweApple kunye nezinye iifemu kuqhelekile ixesha elide, enyanisweni singatsho ukuba oko kwaqala uphawu bahlala benengxaki zamatyala aphakathi kweenkampani. Kwiimeko ezininzi amatyala omthetho anxulumene phakathi kweApple kunye ne Samsung okanye iinkampani ezenza izixhobo okanye izinto zazo. Ngeli xesha sijongene Ityala lokunyhashwa kwamalungelo awodwa omenzi wechiza ali-13 ahambelana nenkqubo yentlawulo ye-Apple Pay.
Ukongeza kwisimangalo sika-Apple esenziwe yinkampani yaseBoston ebizwa ngokuba yiRegistry ekhuselekileyo yoBhaliso, ikongeza iVisa ebandakanyeka ekwaphuleni amalungelo awodwa omenzi wechiza. Into efunwa yile nkampani incinci kukuba babe ngabokuqala ukusebenzisa itekhnoloji yokuhlawula nge-smartphone njengoko sinokuthi sifunde kulwimi oludumileyo The New York Times.
Umlawuli olawulayo weRegistry ye-Universal Secure Registry, uKenneth Weiss, ulumkisa ukuba kwixesha elidlulileyo sele eyazisile inkampani yaseCupertino ukuba ibathathele ingqalelo kodwa iApple ayiphendulanga kwiimfuno zabo nakwicala leVisa, uWeiss wadibana nabaphathi ukuba basebenze. ngesandla kwaye ubandakanye le ndlela yokuhlawula kuzo zonke izixhobo ngo-2010 kunye ekugqibeleni abafikanga kwisivumelwano. Ngoku inkampani imangalela iVisa kunye neApple ngokusebenzisa itekhnoloji yabo kwiindlela zokuhlawula kwaye ichaza ngokubhengeza ukuba kuyinto eqhelekileyo ukuza ematyaleni ukuze "banike ingqalelo" kwilungelo elilodwa lomenzi elibhalisiweyo. U-Weiss, ucela ukonakaliswa ngokunxulumene nokutyholwa kwamalungelo awodwa abenzi ababhalisileyo kwaye iinkampani kulindeleke ukuba zenze ingxelo esemthethweni malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay kunye neVisa bamangalelwe ngolwaphulo mthetho
Fumana amakhulu eetemplate ze-Keynote kunye namaphepha ngexabiso elihlekisayo